Momba anay - Orinasa iraisam-pirenena Eugeng
Orinasa iraisam-pirenena Eugeng
Eugeng dia mpanamboatra matihanina sy mpamorona milina makiazy ao Shanghai . Miezaka mafy izahay hanatsara ny lazany mitombo ao anatin'ny indostrian'ny cosmetika amin'ny alàlan'ny fanatrehana ny filan'ny mpamokatra, ary hanome ny haitao farany sy avo lenta sy fampahalalana farany ho an'ny vahaolana tsara indrindra amin'ny alalàn'ny filan'ny mpanjifa hatrany.
Manana ny ozinina famokarana masinina izahay miaraka amina ekipa R&D matanjaka ao amin'ny Songjiang Indostria Park. Noho izany dia afaka miara-miasa izahay amin'ny fanaovana vokatra novokarina ary manolotra anao ho anao namboarina ho anao. Izahay dia mamolavola, manamboatra ary manondrana milina lokomena, milina fanaovan-gazety vovoka, masinina mpameno molotra, mascara masinina, milina fantsika poloney, milina famenoana pensilihazo kosmetika, masinina vovoka namboarina, laberaera, fonosana fonosana, milina kosmetika miloko hafa sns.
Amin'ny fahafinaretana lehibe, te-hanao raharaham-barotra amin'ny orinasanao manan-kaja isika amin'ity fotoana ity hanitarana ny hetsika ataonay. Raha tsapanao fa azonay atao ny mandray ny fanirianao na afaka manampy anao amin'ny raharaha rehetra, azafady aza misalasala manantona anay.Raha manao fifanarahana amin'i Eugeng ianao dia tsy ho mpanjifanay dia lasa mpiara-miasa aminay.
Inona no ataontsika？
Orinasa mpanamboatra manokana ny milina kosmetika
1. Tongasoa OEM ho an'ny boaty plastika
2. Tongasoa OEM amin'ny famokarana kosmetika toy ny lokomena, ny lokon'ny molotra, ny mascara sns.
3. Tongasoa mba ho tonga masoivohonay ao amin'ny firenenao
4. Herintaona ny fotoana fiantohana
5. Manome horonantsary fanampiana an-tserasera, 24 ora an-tserasera ary torolàlana ho an'ny serivisy teknika
6. Manome kojakoja fanampiny amin'ny fotoana rehetra ilainao
Teknolojia misy patanty
R & D Hery
modely / taona vaovao
Fitaovana mandeha ho azy
Faly izahay fa nanararaotra nanao an'ity fotoana ity hiara-miasa aminao.